Goobaha Khadka Tooska ah ee Deenishka - Xeerarka Koodhadhka Khadka Tooska ah ee Khadka
Loading ...Laga soo bilaabo 1948, Danmark, waxaa ka jiray kali-kali khamaarista, oo ay lahayd shirkadda gobolka iyadoo la adeegsanayo magaca Danske Spil. Layaab maahan, waddanku wuxuu ku faafay goobaha khamaarka dhulka hoostiisa, laakiin 1990 Danmark, waxaa ka jiray sharci-dejin qamaar. In kasta oo Danske Spil ay wali haysato kaligood-lahaanshaha bakhtiyaa-nasiibka iyo tartanka fardaha, tartanka cows-ka, iyo tartanka xamaamyada, abaabulka khamaarka kale ee vidiv waxaa helay shirkado gaar loo leeyahay, laakiin xaddidaadyada qaarkood: shirkadaha ajaanibta ah waxay ka furan karaan casino waddanka gudihiisa kaliya inay abuuraan wada shaqeyn la yeelato shirkad lamaane deenish ah, tusaale ahaan milkiilaha guriga.
Ogaysiis ku saabsan booqdayaasha kaydka khamaarka ee khadka tooska ah in ilaa maanta, dhammaan noocyada khamaarka ee Danmark loo arko inay sharci yihiin. Sharciga khamaarka ee Danmark wuxuu qeexay dhammaan sharciyada ku shaqeynaya suuqa khamaarka deenishka. Kormeer fulinta sharciga, iyo sidoo kale arrimaha khuseeya shatiyeynta khamaarka Khamaarka Danmark (Spillemyndigheden).
1-dii Janaayo, 2012 waxay ahayd isbeddel ku yimid taariikhda qamaarka internetka ee Danmark. Laga bilaabo maalintaas waxaa dhaqan galay sharci cusub oo nidaaminaya khamaarka dalka. In kasta oo xaqiiqda ah in Danske Spil ay ceshatay qayb keli ah oo noocyada khamaarka ah ah, haddana shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo shakhsiyaadkuba waxay noqdeen bogag liisanka laga heli karo oo laga helo khadka tooska ah ee khamaarka 'online gamblingin Denmark', gaar ahaan, sharadka khadka tooska ah ee goobaha isboortiga iyo goobaha lagu ciyaaro qadka. Iyadoo la raacayo sharciga qamaarka internetka ee Danmark, qof ajnabi ah oo khamaar sameeya wuxuu adeeg u fidin karaa qamaarka internetka ee wadanka, wuxuu u baahan yahay inuu tijaabiyo oo shati ka qaato Denmark, iyo inuu bixiyo lacag cayiman.
Horeba sanadka ugu horeeya ee soo galida rukhsadda sharciga cusub waxay heshay 25 bixiyeyaasha qamaarka internetka, oo ay kujiraan qaar kamid ah hawl wadeenada caalamiga ah sida 888, Bwin iyo Ladbrokes. Isla mar ahaantaana, Dawladdu waxay si joogto ah ugu hawlan tahay la-dagaallanka goobaha khamaarka internetka ee aan shatiga lahayn ee Danmark, kuwaas oo ku jira liiska madow iyo xannibista.
Danmark Iskandinavia oo loo yaqaan luul si fudud maaha: aag yar oo dalka ka mid ah tirada hantida dabiiciga ah iyo taariikheed ee soo rogaal celisa. SasinoToplists ayaa kuu sheegaya waxyaabaha ugu muhiimsan ee Danmark, iyo sidoo kale dabeecadaha deenishka ee khamaarka.
Danmark - in yar oo juqraafiya ah iyo taariikh ah;
Danmark oo loogu yeero Boqortooyada Danmark waa sax. Waa waddan ku yaal Waqooyiga Yurub waana kan ugu hooseeya koonfurta waddamada Scandinavianka. Waddanku wuxuu ku yaal jasiiradda Jutland iyo jasiiradaha yaryar ee jasiiradaha, sidoo kale waxaa ku jira Faroe Islands iyo Greenland.
Danmark ilaa iyo hadda waxay ku sii jirtaa boqortooyo dastuuri ah, waana in la ogaadaa xilligaa dalku ahaa boqortooyo aad u xoog badan - illaa iyo qarnigii 19aad boqorradii deenishka "lagu qabtay gacantiisa," Waqooyiga Yurub oo dhan. Hadda Faroe Islands iyo Greenland waxay leeyihiin heer sare oo madax-bannaanida iyo is-xukunka. Laga soo bilaabo 1972, deenishku wuxuu xukumaa boqoradda 54-aad ee loo yaqaan Margrethe II.
Sharciyeynta casinos ee dalka ayaa dhacday 1990 waxayna dhexdeeda ku aas aaseen mabda'a aasaasiga ah ee rukhsadda hawlwadeennada shisheeye. Shuruudda ugu weyn ee bixinta rukhsad - hawlwadeen ajnabi ah oo ka shaqeeya arrimaha khamaarka ayaa ah in la abuuro shirkad deenish ah iyada oo lala kaashanayo shirkadda deenishka ee hadda jirta. Habka ugu habboon ee loo abuuri karo iskaashi noocaas ah salka hoteel kasta, taas ayaa dhacday.
Si buuxda u hogaansanaanta dhinaca deenishka waxaa ka shaqeyn kara shirkado "Holland Casino" oo ka socda deriska Netherlands, "Bad Neuenahr" oo ka socda Jarmalka, "Casinos Austria" oo ka socda Austria. Heerka canshuurta ee gobolka waa mid sareeya, waxay kuxirantahay macaashka casino wuxuu ka bilaabmaa 45% ee wareega sanadlaha.
Waqtigan xaadirka ah, waddanku wuxuu leeyahay 6 casinos weyn. Waxay ku yaalliin Aalborg, Orhusskae, Clamps, Odense, Helsingor iyo, dabcan, caasimada, Copenhagen.
Casino Kobanheegan. Shuruucda guud ee kaashka ayaa si aad ah ula kulma casino-yurubiyanku waxay ka bilaabmaan 14.00 waxayna dhammaadaan 4.00. Booqo casino waxay kaliya noqon kartaa da'da 18, markaa waxaad u baahan tahay inaad haysato baasaboor.
Nasiib darro kale - irridda waxaa lagu weydiin doonaa inaad bixiso khidmadda gelitaanka. Tigidhka maalintii waa 95 koron oo deenish ah (qiyaastii € 12), hal toddobaad - 265, iyo sannadka 2.095 DKK. Xilliga xagaaga, waxaad ku booqan kartaa qamaarka gaaban iyo silsilado, laakiin dharka isboortiga halkan lama soo dhaweynayo.
Xilliga ciyaarta turub-ka ee khamaarka waa inaysan xirneyn muraayadaha, isticmaal iPod-ka oo xirashada funaanado gacmo-gashi la'aan ah. Laakiin inta lagu guda jiro taxanaha adduunka ee turubka sida WPT iyo sharciyada kale ee waaweyn ee tartanka ee ku saabsan muuqaalka dimoqraadiyadda.
Guud ahaan, casinos-ka Kobanheegan waa kuwo caan ah oo baahi weyn loo qabo. Waxay leedahay wax walba oo kaliya oo u rajeyn kara nafta khamaariistaha: Roulette (Yurub iyo Mareykan), nooc kasta oo mishiinno lagu ciyaaro (xulashooyin dhan 140), miisas turub, blackjack, iyo Punto ee Banco.
museum «Rumayso ama Maya!». Address: R å dhuspladsen , 57. Matxafkan aan caadiga ahayn ee ku hoos yaal calaamadaha xiisaha leh ee "Rumayso ama ha rumaysan!" Ururinta Leroy Ripley - safar iyo aruuriyaha. Sanadihii la soo dhaafay, boqolaal safar oo adduunka ah wuxuu ku soo aruuray waxyaabo badan oo yaab leh. Halkan waxaad ka heli doontaa ciyaar ka mid ah Taj Mahal, qalfoofka mammoth, kataarad, ku ciyaaraya bilaa xadhig iyo xitaa badda oo qosol badan.
Matxafka "Experimentarium". Cinwaanka: Tuborg Havnevej, 7, Hellerup. Haddii aad la safreyso carruur ama aad rabto inaad fahamto dhammaan sharciyada jireed ee isku mid ah - waa meesha ugu fiican. Waxaa jira mashiin polygraph ah oo loogu yeero duufaan iyo dhulgariir, iyo waxyaabo kale oo soo jiidasho leh. Dhamaan bandhigyada waa la taaban karaa.
Matxafka "Guinness". Cinwaanka: Østergade 16. Matxafkani uma baahna hordhac, maaddaama Guinness ay diiwaan geliso qof walba wuu ogyahay. Laakiin markaad wax uun ka akhrido rikoor kasta, mararka qaarkood way adag tahay in la qiyaaso. Halkan waxaad ka heli kartaa in ka badan 500 oo bandhig oo ah diiwaanadii ugu xiisaha badnaa, iyo “bandhigga Mystic Exploratorie » waxaad ku qabsan kartaa hooskiiaga, madaxa ku dhufo oo ka soo horjeeda qofka fadhiya iyo xitaa inuu fariisto kursiga korantada.
Beerta “Tivoli” Cinwaanka: Vesterbrogade 3. Beertan madadaalo waa tii ugu da'da weyneyd adduunka, habka, wuxuu u waxyooday mar Walt Disney inuu abuuro shabakad Disneyland. Ma jiraan wax soo jiidasho supernavorochennogo ah, laakiin waxaa jira jawi aad u raaxo leh dabaaldega iyo farxad.
Matxafka "Erotica". Cinwaanka: Kobmagergade 24. Tani waa matxafkii ugu horreeyay ee adduunka ku faafiya, wuxuu soo muuqday 1992. Halkan waxaad ka raadin kartaa taariikhda dabeecadaha xagga erotic ilaa Rome hore iyo Hindiya illaa iyo maanta. Waxaa jira sawir gacmeedyo, farshaxanno, sawirro iyo fiidiyowyo, iyo sidoo kale dharka hoosta galmada iyo dhammaan noocyada aaladaha laga helo jihada sadomasochistic. Soo gal sababo cad, oo leh 18 sano, laakiin ardayda leh qiimo dhimis ah 50%.
Maalinta shaqadu waxay bilaabataa goor hore - ugu horayn 8-da subaxnimo, deenishku waxay aadaan shaqo, 16.00na waa laga dhaafay. Dukaammada ayaa sidoo kale la xidhay goor hore, sidaas awgeed deenishku waxay sameeyeen alaabada ugu muhiimsan ee la soo iibsaday dhammaadka wiigga;
Danmark waxay leedahay canshuur aad u sareysa - celcelis ahaan 43%. Waxay kuxirantahay heerka dakhliga muwaadinka iyo dheefaha isaga kuhaboon;
Shaqada, nin kasta oo deenish ah ayaa helaya saddex cunto maalintii. Ololaha deenishka, shirkadda ama ururku waxay dhaqan ahaan leeyihiin qol ay wax ku cunaan oo ay ku kariyaan;
Ragga deenishka ah oo si siman ula shaqeeya dumarka. Waxay dhaqaan sagxadaha dhulka, waxay daryeelaan carruurta umana diidaan inay karsadaan wax dhadhan fiican leh.
Hantida ma guurtada ah ee ka jirta Danmark way qaali tahay sidaas awgeedna badanaa tayo ahaan way liidataa. Wareegyada derbiyada, mararka qaarkoodna qorshaynta ugu fiican ayaan ka socda guryaha badankood.
Danmark, daryeel caafimaad oo bilaash ah, isla mar ahaantaana dhakhtar kasta oo qoys ayaa ku lifaaqay tiro bukaan ah. Tan waxaa loo sameeyaa iyadoo lagu saleynayo dhul ahaan, iyo haddii aad guureyso, ka dibna dhakhtarku waa inuu beddelaa;
Denmark - Qaranka baaskiilka. Aad baa loo jecel yahay loona jecel yahay.
Tusaalaha Danmark, waxaad ka arki kartaa wadada la raacayo, haddii howshu tahay in la abuuro warshad khamaar ahaan soo jiidasho leh runtii. Deenishku, in kasta oo ay dabeecad ahaan deggan yihiin, haddana dhib kama qabaan inay waqti ku qaataan qamaarka, taasna waxay u tahay fursad kasta.
Ma dhihi karno haddii khamaarka ku yaal Danmark, tallaabo kasta, maahan. Waddanku wuxuu leeyahay oo keliya 7 hawl wadeenno xukuma shatiyeynta, laba codsiina waa la sugayaa. Si kastaba ha noqotee, xitaa khamaarka, taasi waa, ku filan in lagu qanciyo dookhyada khamaarka ee deenishka. Marka la eego, Danmark, waxay hoy u tahay qiyaastii 5 milyan oo qof, iyo 7 casino ayaa si dhib yar ula qabta qulqulka booqdayaasha. Iyo haddii aad nasiib u leedahay inaad booqato waddankan cajiibka ah, hubi inaad booqato mid ka mid ah casino. Xarumaha khamaarka badanaa waxay ku yaalliin rubuc taariikhi ah, dhismaha hudheelka, oo xiiso leh xitaa booqashada.
Aarhus, oo ah magaalada labaad ee ugu weyn Denmark, ayaa ka shaqeysa mid ka mid ah kuwa ugu caansan deenishka. Waxaa loo yaqaan oo kaliya ma aha gudaha gudaha xarrago leh, laakiin sidoo kale tayada adeegga. Dhismuhu wuxuu kaloo ku yaal iyo hudheel hudheel hudheel Royal ah, oo jecel inuu dego dadka caanka ah iyo dadka hodanka ah. Aagga hudheelka waxaa ku yaal goobo taariikhi ah oo fara badan. Waxa kale oo jira Quarter Latin ah oo caan ah oo leh maqaaxiyo webi iyo dukaamo.
Ciyaaraha la heli karo ee ku yaal casino waxay ku yaalliin miisas yar oo lagu sharraxo roulette, blackjack iyo kaftanka turubka. Hoolalka waxaad ka heli kartaa 80 mashiinno heerka koowaad ah. Badanaa darbiyada casino waxay qabtaan tartamada waaweyn ee turubka.
Danmark soo jiidashada leh, waa xaqiiqda ah in magaalo kasta oo ka mid ah, oo aan kaliya ahayn caasimadda, ay awood u leedahay inay soo jiidato dalxiisayaasha. Mid ayaa u maleynaya in dhammaan casinos ay ku yaalliin Kobanheegan, laakiin maahan. Mid ka mid ah khamaarista ugu raaxada badan ayaa si guul leh uga shaqeeya magaalada Aalborg. Kasiinis aan loo baahnayn oo ku taal dhismaha hudheelka ee qaybta dhexe ee magaalada iyo hareeraheeda had iyo jeer waa nolol. Naadiyo badan, baararka raaxada leh iyo makhaayadaha yaryar ma heli doonaan taageerayaal caajis leh nolosha habeenkii. Kasiinada waxaad ku ciyaari kartaa dhowr nooc oo roulette ah, turub iyo ciyaaro kale oo kaararka ah. Sidoo kale waxaa laga heli karaa in ka badan 30 boosaska, oo ay ku jiraan jaakbotyada horusocodka ah.
Si kastaba ha noqotee, casino ugu weyn Denmark ee ku yaal caasimadiisa. Waxaa la furay 1990 habeen ka hor Sannadka Cusub wuxuuna ahaa aasaaskii ugu horreeyay ee sharci ee qamaarka dalka. Haddii aad u baahan tahay xulashada ugu badan ee madadaalada casino, markaa waxaad u baahan tahay inaad bilowdo inaad ka raadsato Kobanheegan. Dhowr iyo toban miisas ciyaaro ah iyo in ka badan boqol boos ayaa u oggolaanaya inay helaan ciyaar aad jeceshahay. By habka, dhacdooyinka turub ugu weyn waxaa inta badan abaabulay gudahood darbiyada hay'addan. Goobta waxaa ku yaal mid ka mid ah hoteelada ugu fiican Radisson Blu Scandinavia.
Natiijooyinkaas waxaa lagu macnayn karaa iyadoo dadka deenishku saacadaha shaqada ka gaagaaban yihiin, hase yeeshee, celceliska dakhliga soo gala - waa kan ugu sarreeya adduunka.
Kahor Janaayo 1, 2012 Danske Spil oo ay dowladu laheyd ayaa aheyd qofka leh liisanka ururka iyo fulinta sicirka. Inta kale ee deenishka iyo ajaanibta ah looma oggolaan inay bixiyaan madadaalo khamaar iyo sharad ciyaaraha. Laakiin dawladda hoose ayaa lagu qasbay inay wax ka beddesho xaaladdan, maxaa yeelay sharcigu si sax ah uma shaqeeyo, iyo in ka badan 400 boggag internetka ah oo lagu ciyaaro sharad si ay uga qaataan deenishka. Kheyraad badan ayaa xitaa la siiyaa luqadda deenishka si ay ugu fududaato adeegsadayaasha nidaamka qamaarka.
Shuruucda cusubi waxay oggol yihiin inay adeegyadooda siiyaan shirkadaha sida Ladbrokes iyo bet365, in kasta oo gobolku haysto lahaanshaha keli ah ee sharadka jinsiyadaha xoolaha iyo khamaarka, kuwaas oo ku saleysan nasiib saafi ah. Waxaa loola jeedaa cayaaraha sida kaararka xoqida iyo bingo, halkaas oo ciyaartoygu aanu isticmaalin istiraatiijiyad ama xirfad isla markaana uu ku tiirsan yahay mararka qaarkood.
In kasta oo luminta xuquuqda gaarka ah ee abaabulka iyo qabashada shirkadda khamaarka Danske Spil ay si aad ah kor ugu kacday kadib markii la beddelay sharciga, haddana waxaa loo qaybiyay laba shirkadood: Danske Lotteri Spil iyo Danske Licens Spil. Qeybta dambe waxay ka hadlaysaa qaybta ciyaaraha ee internetka oo dhowaan la diiwaangeliyey kororka dakhliyada 60% marka loo eego sanadkii hore.
Maanta, deenishku waxay leeyihiin fursado badan oo khamaarista ah. Waxay ciyaari karaan ciyaaro ay ka mid yihiin turubka khadka tooska ah ee ka dhanka ah ciyaartoyda kale ee adduunka. Laakiin dawladda deenishku waxay si taxaddar leh u khuseysaa shirkadaha xayeysiinta iyo shati siinta ee ku yaal dibedda waxaa xukuma xeerar adag.
Sida Yurubiyaanka badankood, deenishku waxay jecel yihiin kubada cagta waxayna xiraan kooxo badan oo Super League ah. Horyaalka Ingiriiska sidoo kale waa mid caan ah sababtoo ah waxaa badanaa lagu muujiyaa Satelite-ka Danmark (Daanishku waxay arki karaan 280 oo ka mid ah 380 kulan xilli ciyaareedkiiba).
Dhawaan, xiisaha kororka ee golf-ka, badanaa waxaa ku mahadsan guusha Thomas Bern. Ciyaaryahanka da'da yar Torbjörn Olesen, sida muuqata, wuxuu gacan ka geysan doonaa xiisaha taageerayaasha. Kubbadda Gacanta iyo badminton waxay gaareen guul waarta, oo ay weheliyaan baaskiil heer caalami ah oo ku guuleystay abaalmarinno tartankii baaskiilka ee “Tour de France”.
Deenishka ayaa sidoo kale aad u qabatimay turubka. caannimada turubka internetka ayaa bilaabay inuu si dhaqso leh u koro kadib guushii ay ka gaareen horyaalkii turubkii Gus Hansen horaantii 2000. Danmark, ciyaartoy badan oo xirfadlayaal turub ah, wadanku wuxuu kujiraa 25-aad qiimeynta aduunka ee WSOP. Khamaarka Bulshada Danmark ayaa doorbidaya goobaha turub-ka ee waqtigooda la tijaabiyay sida Party Poker.
Khamaarka Danmark wuxuu bilaabay inuu si dhakhso leh u horumariyo ka dib markii la soo saaray sharciyo cusub sanadkii hore dakhliga guud ee soo gala qaybta khamaarka ayaa gaadhay 4 bilyan oo DKK.
Si kastaba ha noqotee, dawladdu waxay sameyneysaa wax kasta oo suurtagal ah si looga hortago bogagga internetka ee khamaarista ajaanibta aan ruqsadda haysan oo adeegyo siiya deenishka Tani waxay keentay xaqiiqda ah in kaliya 2012, 57 goobood ayaa lagu duubay liiska madow.
Layaab ma leh in, ka dib tobanaan sano oo keli ah oo keli ku ah khamaarka Danmark, shirkadda Danske Spil ayaa wali leh boqolkiiba 62% suuqa. Waxa laga yaabaa inay muddo qaadato ka hor inta ciyaartooyda kale ay la tartami karaan buugga sameeyaha, oo adeegyadiisa loo adeegsado inta badan dadka deenishka ah.
delaware lotto ciyaar 3